50,000 Shaqalaha Dalxiiska Jamaica Waxay Dib Ugu Laabanayaan Shaqada 6-dii Bilood Ee La Soo Dhaafay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » News » 50,000 Shaqalaha Dalxiiska Jamaica Waxay Dib Ugu Laabanayaan Shaqada 6-dii Bilood Ee La Soo Dhaafay
Jebinta Wararka Caalamka • Caribbean • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Mudane. Edmund Bartlett (2 -aad bidix) shaybaarrada avocado jalaato dhadhan leh oo ka timid Kande's Delights iyadoo agaasimaha shirkadda, Kevin Dean (midig) eegayo. Waxaa hadda wax wadaagaya Xoghayaha Joogtada ah ee Wasaaradda, Jennifer Griffith (bidix) iyo Richard Pandohie, Guddoomiyaha Kooxda Farsamada Wax -soo -saarka, Golaha Xiriirka Dalxiiska. Munaasabadan ayaa ahayd mid lagu soo bandhigayay bandhigyada Bandhiggii 7 -aad ee Kirismaska ​​bishii Luulyo oo shalay lagu qabtay (22 -kii July) Hotel Jamaica Pegasus, New Kingston.
Warshadaha dalxiiska ee Jamaica waxay dib u soo celiyeen in kabadan 50,000 oo shaqaale 6dii bilood ee ugu dambeysay, taas oo muujineysa awooddeeda adkeysi iyo awooddeeda inay dib uga soo kabato dhibaatooyinka.
Bandhigii ganacsiga ee maalintii Kirismaska ​​ee bishii Luulyo, Wasiirka Dalxiisku wuxuu ku dhawaaqay warka ku saabsan in badan oo ka shaqeeya dalka.
Wuxuu sidoo kale xusay in kudhowaad 700,000 oo soo booqdeyaal ah ay joojiyeen 7-dii bilood ee lasoo dhaafay.
Dalxiiska Jamaica wuxuu qorsheynayaa inuu gaari doono 1 milyan oo soo booqdayaal ah iyo rakaabba dhammaadka bisha Ogos.
Wasiirka Dalxiiska, Mudane. Edmund Bartlett, ayaa ku dhawaaqay shalay (22-kii July) munaasabaddii 7-aad ee bandhigga ganacsiga "Christmas in July" ee ka dhacay Jamaica Pegasus Hotel, New Kingston. Hindisaha sanadlaha ah wuxuu dhiirrigeliyaa iibsashada alaabada maxaliga ah ee dhabta ah ee daneeyayaasha qaybta dalxiiska iyo Jamaica shirkadaha raadinaya hadiyado macaamiisha iyo shaqaalaha.
Sidoo kale, 7-dii bilood ee la soo dhaafay, waxaan keenay ku dhowaad 700,000 oo soo booqdayaal ah (joogsadayaal ah), dhammaadka bisha Ogos, waxaa naloo qorsheeyay inaan gaarno hal milyan oo booqasho iyo rakaab soo galaya Jamaica, taas oo keeni doonta meel ka mid ah gobolka US $ 1.5 bilyan dhaqaalaha maxalliga ah. Ma jirto warshado kale oo taas ku sameyn kara muddo toddobo bilood gudahood ah; warshadaha dalxiiska ayaa leh, ”ayuu wasiir Bartlett u sheegay dhagaystayaasha diblomaasiyiinta, daneeyayaasha dalxiiska iyo wakiillo ka socda shirkadda Jamaica.
Isaga oo ka hadlaya awooda dhismaha ee alaab-qeybiyeyaasha maxalliga ah, wasiir Bartlett wuxuu yiri: “Markaan soo kabaneyno, waxaan u baahanahay inaan si wadajir ah u soo kabano oo aan si xoog leh u soo kabanno. Waxaan u baahanahay inaan soo ceshano inta badan khasaarihii ina soo maray ka hor faafida sababta oo ah faafka ka hor waxaan lahaan jirnay xaalad daadashada doolarka Mareykanka ah oo ka timid warshadaha ilaa 60 cent Waxaan gaarnay heerka 40 senti haynta. ”
Ayuu yiri wasiirka dalxiiska Jamaica waa inay guurto in ka badan 40 senti ilaa 50 senti heerka haynta ah, isagoo xusaya in "aafada na siisay fursadan maxaa yeelay waxaan ka bilaabeynaa eber dhulka si aan u wada bogsano."